उपत्यकामा सडक बालबालिका कसरी बाँच्छन् यो चिसोमा ? |
22 February, 2018 | Sandeep Bhattarai | 6350 Views | comments
शरीर नै कक्रक्क पार्ने चीसो, सडकको किनारमा गुडुल्किएर फोहरको थुप्रोलाई डसना र सिरक बनाएर कापिरहेका बालबालिका देख्दा जो कोहीको मन पग्लिन्छ, तर कसैले उनीहरुलाई केही गर्दैनन् । केवल कठै विचरा, छोराछोरीको पालनपोषण गर्न नसक्नेले किन जन्माउनु भन्दै बाबुआमालाई धिक्कार्दै अघि बढ्छन् ।
अर्कोतिर यिनै बालबालिकाका कारण धेरैको विलाशी जीवन चलेको छ । त्यसैले त जति नीति बने पनि, जति कानुन बने पनि र जति नै योजना बने पनि उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख शहरका सडकमा बालबालिकाको संख्या कहिल्यै घट्दैन, अनि कारखानाहरुमा काम गर्ने बालश्रमिकको संख्या पनि घट्दैन ।
उपत्यकामा पछिल्लो समय बाल श्रमिक र सडक बालबालिकाको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक लगायत विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरु आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न होटेल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, कलकारखानाहरूमा बाल श्रमिकका रूपमा काम गदै आएका छन् ।
बालबालिकाको हक हितमा काम गर्ने संघसंस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा घटेको देखाए पनि पछिल्लो समय सडक बालबालिका र बाल श्रमिकको संख्या बढेको पाइन्छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने दर्जनौं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले बाल श्रम न्यूनीकरणका लागि करौडौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि यो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी दबाबमा कुनै पनि काम लगाउनु हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालबालिकाको हक प्रत्याभूत गरेको छ ।
सडक बालबालिका आफ्नो जीविका आर्जन गर्न नसक्दा उनीहरु आपराधिक क्रियाकलाप, चोरीजस्ता घटनामा उनीहरुको संलगनता बढि रहेको छ ।
आमाबाबुको काखमा हाँसीखुसी रहने र किताबकापी लिई विद्यालय जाने उमेरका यी केटाकेटी सडकमा प्रवेश गर्न बाध्य छन् । सडकमा बस्ने बालबालिकाको संख्यामा दिन प्रतिदिन बढ्नुको मुख्य कारण पारिवारिक हिंसा नै हो भन्ने कुरा सिविन नामक संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडकमा बालबालिका बढ्दै जानु भनेको संयम बालक, परिवार समाज र राष्ट्रका लागि पीडादायक अवस्था हो । सडकमा आश्रति बालबालिकाले पीडा र अप्ठ्यारो त भोगी नै रहेका छन्, यसका साथै असुरक्षा, खतरा एकतर्फ छ भने अनियमित जीवनको भविष्य अझै कहालीलाग्दो छ।
सडक बालबालिका बढ्दै जाने क्रममा वृद्धि हुनुको साथै उनीहरु लागूपदार्थ सेवन गर्ने, चोरी गर्ने, पाकेट मार्ने समूह बनाएर हिड्ने, फोहरी अशोभनीय व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरु आफ्नो गाँस, बास र कपासका लागि असामाजिक कार्यमा संलग्न भएका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को बालबालिकाको हकसम्बन्धी महलमा जोखिममा परेका सडक बालबालिकाको लागि भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यबाट विशेष सुविधा प्रदान गरिने कानुनी हक, अधिकार सुनिश्चित गरिएता पनि यस्ता बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, गास, बास र कपास जस्ता आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नै देखिन्छन् ।
संसारमा एक एक सेकेण्डमा केयौ बालबालिकाहरु जन्मिरहेका छन् । बर्षेनि बालबालिकाक लागि भनेर विदेशी एजेन्सीहरुले लाखौँ डलर पठाउँछ्न तर ती डलरले यहाँ रातारात करोडपति बन्ने खेल खेलिरहेका छन बालबालिकाको वास्ता नै नगरी । बालअधिकार संरक्षण गर्ने नाममा यसरी बालबालिकाको अधिकार माटोमा मिसाउने तपाई हाम्रै बीचमा खुलमखुल्ला हिडिरहेका छन् तर हामीहरु भने टुलुटुलु हेरिरहेका मात्रै छौ । के उनीहरु कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिदैन ? यदि सकिन्छन भने किन ल्याइएका छैनन ।
नेपाल सरकारले सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२, स्वीकृत गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण एवम् व्यवस्थापन गरी पहिलो चरणमा उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने कार्य संचालन गरे पनि यसको प्रतिफल भने मिठो मान्न सकिन्न ।
सडक बालबालिकाका समस्या समाधान गर्न सडकमा भौतारिने बालबालिकासित भन्दा धेरै उनीहरुको परिवारसित जोडिएका छन् । त्यसैले यो समस्याको समाधान त घर–घरमा नै खोज्नुपर्छ । तपाईँ हामीले नै कतै हाम्रा सन्ततिलाई आफैले सडकमा जानुपर्ने वातावरण सृजना त गरिरहेका छैनौं, गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। के बालबालिकाको रहर हो र यो पुस माघको चिसोमा सडक पेटीमा सुत्न र मागेर खान ?
त्यसैले हामी सचेत होऔं । एउटा जिम्मेवार आमाबुबाको दायित्व बालबच्चालाई जन्म दिनु मात्र होइन। उचित पालन पोषण गरी अगाडि बढ्नका लागि मार्गप्रदर्शन गर्नु सबै आमबुबाको समान कर्तब्य हो र यसबाट बन्चित हुन नपाउनु सबै बालबालिकाको पनि अधिकार हो ।
#उपत्यकामा सडक बालबालिका कसरी बाँच्छन् यो चिसोमा ?